ဒီနေ့ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ....အမှတ်တမဲ့ပါပဲ... တိုပါးယိုး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားတယ်...ပြီးတော့ ဟိုဟိုဒီဒီနဲ့ လျှောက်သွားရင်း နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စီးတီးဟော မှာပဲ လမ်းခွဲကြတယ်...အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မြန်မာကို ဖုန်းခေါ်တော့ အဖေက ပြောတယ်...အမေ က သားကြီးကို လွမ်းလိုက်တာတဲ့.... ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ဒီနေ့ က ကျွန်တော့ ဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရနေ့လေးဆိုပါတော့... ရင်ထဲမှာ ဆို့တက်လာတယ်...ကျွန်တော့ မျက်ရည်တွေကျလာတယ်...ပူလိုက်တာဗျာ မျက်ရည်တွေက ... ကျွန်တော် မငိုပါဘူး...ရေးချင်တာတော့ အများကြီးပါပဲ...
281 279 8594 ( 5th July 2007 )190 023 9338***218 910 1572582 611 3022342 805 6383------------------------352 788 0613 (7th July 2007)***787 591 5875098 370 0287-----------------232 499 1275(8th July 2007)500 052 1814(11 july)***310 314 4266 ( 12th July 2007)222 938 6261(14 July 2007)637 297 4418(15 July 2007)***965 458 3207(15 July 2007)169 932 4318(15 July)**707 897 2090(15 July)***355 691 2503184 097 8803 *******937 288 1938 ( 19 July 200)NEW++++++++++468 508 1083 (20 th July 2007)483 217 1060 (21 st Jauly 2007)071 863 2720**890 931 8651 (22nd July 2007)** 515 495 6279 28 july*362 289 6092 1 Aug 2007+4921243361 3Aug2007+205 203 35693Aug 2007+339 242 7350 4aug+172 249 9908 6aug+791 505 8290 8 8 2007+361 467 2102 9th aug 2007+099 798 1248 10 th aug 2007325 831 9760 14th 08 070658 6525 4029(6512 6580)5434 7751 10336878 7118 7692 (21aug)2806 5238 7533 ( 22 aug)5834 1112 6397 23 aug582 611 3022218 910 1572342 805 6383491 029 3877017 048 2042 ( 22 sept 2007)070 340 1728 ( 22 sept 2007)428 532 8470 ( 25 sept 2007 )044 015 0698 25 sept 2007573 288 8869 cents006 605 9582 k325 761 4003 k836 641 7200 k623 330 0186 k933 629 9202 ( 30 Sept 2007) k421 761 8571074 044 7808863 277 5086 k630 791 2921 k - 10 cards645 045 36942Oct 20074065 4439 5023 - 6512 6580 k082 198 8766 k400 021 1731 k199 466 9223 k114 847 3584k -4Oct047 643 8058k -4Oct861 307 1743k -4Oct833 324 4935k -6Oct821 591 8490k -6Oct042 710 8857 k -6Oct231 752 2663 -7Oct809 595 7304 -7Oct276 413 8327 -7Oct163 225 1696034 252 5550476 187 7747547 061 6115252 740 8313028 238 6694212 566 6298 539 506 3923065 756 8892201 924 5360181 533 2094690 519 5725024 422 2610357 574 2111578 185 9016322 503 3303499 537 1790579 627 2426248 197 3882
အခုတော့ စိတ်က တော်တော်လေး နေရထိုင်ရတာ နည်းနည်းလေး အဆင်ပြေလာပါပြီ... လူကတော့ စိတ်တိုင်းမကျသေးဘူး... Migration Project ကလည်း Half Way မှာပဲ လက်လွှတ်လိုက်တယ်... ဘ၀မှာ အဲဒီထက် အဆမတန်အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေအတွက် အချိန်ပေးရမယ်လေ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေနပ်ပါတယ်... ကျွန်တော့ကို အဲဒီ Project Assign လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ မန်နေဂျာကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်... ပြီးဆုံးအောင် မလုပ်ခဲ့ရပေမဲ့ တော်တော်များများကို Manage လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်လေ...မဆိုးပါဘူး...အဲဒီ Project လည်း အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်...Blog ထဲ မ၀င်တာတော့ တော်တော်လေးကို ကြာသွားပြီ... ၃ ပတ်စာ အလုပ်အကြွေး တွေက တစ်ဖက်, နေ့စဉ် အလုပ်တွေက တစ်ဖက်နဲ့ ချာလပတ်ကို ရမ်းနေတာနဲ့တင်...လောလောဆယ်တော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသေးဘူး...အော်သိပြီ... မှန်မှန်အိပ်ရမယ်...အချိန်မှန်မှန်အိပ်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာလည်း တော်တော်လေးကြာပါပြီ...မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး...
မင်းကို လွမ်းနေပါတယ်...Anatawo omotta
ဘ၀မှာ ဒီလောက် ခါးခါသီးသီး တစ်ခါမှ မခံစားဖူးပါဘူး...ဘာလို့ ငါ့ကျမှ လာဖြစ်ရတာလဲ...ရက်ရက်စက်စက် ကျနေတယ် မျက်ရည်တို့ရယ်...
23rd Aug : At midnight, Started to plan to go back to Myanmar24th Aug : MI 518(SG to YGN), Reached to YGN at 6:00 PM (GMT +06:30)24th Aug - 11th Sept : at YGN ( အီးမေးအား ၅ မိနစ်ခန့်သုံးစွဲ )11th Sept : MI 517(YGN to SG), Reached to SG at 8:25 PM (GMT +08:00)12th Sept မှ စပြီး အကန့်အသတ်မရှိ လေလွင့်နေမည်...Best Regards,Sai
1. Formulateastudy plan2. Concentrate on difficult tasks first3. Createagood study environment4. Take regular breaks while studying5. Know when to change your study pattern6. Know when to "call itaday"7. Review and take notes8. Getastudy partnerReference : C i s c o . c o m
ပရောဂျက်တစ်ခုအား assign လုပ်ချင်းခံရသည်...ကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်....ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်ဝင်စားသော Routing နှင့်ပက်သက်နေသောကြောင့် အရမ်းကို အားကြိုးမာန်တက် လုပ်ချင်သည်...Data Line Migration Project....အတွေ့အကြုံတွေ Knowledge တွေ အများကြီးရနေသည်...Migration Date သည် ၁၅ ရက် စက်တင်ဘာလ...ဒီ ပရောဂျက်မှ Project Management Knowledge တွေကိုလည်း စီနီယာများထံမှ အများကြီးရသည်...တနည်းအားဖြင့် the way of work ...SingTel မှ အင်ဂျင်နီယာများနှင့်လည်း အတူတူ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရသည်...လက်ရှိလုပ်နေသော Project များကို စိတ်မ၀င်စားခြင်းမဟုတ်...သို့သော် ၀န်ခံရလျှင် ယခုProject လောက် စိတ်မ၀င်စား...စိတ်ထားမထက်သန်...စီနီယာများ..Online မှ သူငယ်ချင်းများ...မိတ်ဆွေများ ကို လည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်သည်...Project က ခုမှ ၂ ရက်ပဲ စကာရှိသေးသည်....အတွေ့အကြုံများကတော့ အများကြီးရနေသည်....Migration Date 15 September သည် ကျွန်တော့အတွက်....
Eat this Lab!
MV Beautiful Days - Promise
I miss you so much when I listen that song! Posted by
Request : The most beautiful days OST
Hi Everyone!If you know the downloadable link of The most beautiful days OST, please share to me!Official Site : http://www.sbs.co.kr/tv/beautidays/Best Regards,Sai
To Dad and Mom...You raise me up, so I can stand on mountains;You raise me up, to walk on stormy seas;I am strong, when I am on your shoulders;You raise me up... To more than I can be.